२०३६ सालसम्म कालापानी नेपालकै रहेको प्रमाण भेटियो, हेर्नुहोस् ऐतिहासिक कागजात ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/२०३६ सालसम्म कालापानी नेपालकै रहेको प्रमाण भेटियो, हेर्नुहोस् ऐतिहासिक कागजात !
काठमाडौँ, माघ ५ । पूर्वसचिव तथा दार्चुलाका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ) द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले टिंकरभञ्ज्याङ्ग तथा कालापानीको निरीक्षणमा गएको तथ्य पुष्टि गर्ने कागजात फेला पारेको छ । प्राप्त पुराना ऐतिहासिक कागजातहरुमा पूर्वसीडीओ ढुङ्गेल दार्चुलामा हाजिर हुन जाँदा २ नोभेम्बर १९७९ अर्थात् १६ कात्तिक २०३६ सालमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले ढुङ्गेललगायतको टोली उत्तर प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुला हुँदै दार्चुला जानुहुने भएकोले ट्रान्जिटको सुविधा उपलब्ध गराइदिनु भन्ने व्यहोरा समेतको पत्र रहेको छ ।
उनको यो भ्रमणले अहिले भारतले निकालेको नयाँ नक्सामा मिचिएको कालापानी क्षेत्रको सबै भूभाग २०३६ सालसम्म नेपालको भएको पुष्टि गरेको छ । तर, त्यसपछि कहिले उक्त भूभाग भारतले मिचेको भन्ने अझै पनि नेपाली पक्षले किटान गर्नसकेको छैन । यद्यपि विभिन्न प्रमाणहरुले कालापानी क्षेत्र नेपालको भए पनि पछि भारतले मिचेको भन्नेचाहिँ पुष्टि भएको छ । नेपाल सरकारले उक्त जमिन नेपालको भएको दाबी गर्दै आए पनि अहिलेसम्म भारत वार्ताको लागि बस्न समेत तयार भएको छैन । आर्थिक दैनिकबाट
भारतले नेपाललाई दियो १ अर्ब ५४ करोड भारु